अमेरिकाले नेपाललाई ५० लाख खोप दिन लागेको दावी गलत, खासमा कति खोप दिन लागेको हो ? – NawalpurTimes.com
अमेरिकाले नेपाललाई ५० लाख खोप दिन लागेको दावी गलत, खासमा कति खोप दिन लागेको हो ?
प्रकाशित : २०७८ जेठ २१ गते १५:०२
काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस प्रशासनले बिहीबार २५ मिलियन अर्थात अढाइ करोड डोज कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन विभिन्न देशहरुलाई बाँड्ने घोषणा गर्यो । यो घोषणालगत्तै नेपालले कति खोप पाउन लागेको हो भन्ने विषयमा चर्चा बढ्यो । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकालाई धन्यवाद दिए । केही समयअघि मात्रै नेपालले अमेरिकालाई खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । नेपालको आग्रह सुनिदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाप्रति आभार व्यक्त गरे ।